अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई स्थानीय नेताको प्रश्नः उपचुनाव किन ? - Everest Dainik - News from Nepal
अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई स्थानीय नेताको प्रश्नः उपचुनाव किन ?
काठमाडौं, असोज २५ । वामदेव गौतमलाई उपचुनावमार्फत संसद्‌मा ल्याउनुपर्ने कारण स्पष्ट पारेर मात्र काठमाडौं ७ खाली गराउन स्थानीय नेताहरूले नेकपाका अध्यक्षद्वयलाई सुझाव दिएका छन्  ।
प्रतिनिधिसभाका सांसद रामवीर मानन्धरले राजीनामा दिने र गौतमलाई त्यहाँबाट उठाउने तयारीपछि उक्त क्षेत्रका नेता बुधबार केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए  ।
प्रदेश सांसद वसन्त मानन्धर, प्रकाश श्रेष्ठ र न्हुच्छेकाजी श्रेष्ठले दुई अध्यक्षलाई स्थानीय वस्तुस्थिति अवगत गराए । उनीहरूले अकस्मात् काठमाडौं ७ खाली गर्ने कुरा आउँदा मतदाता र पार्टी कार्यकर्ता अन्योलमा परेको बताए । न्हुच्छेकाजी यसअघि उक्त क्षेत्रका निर्वाचन परिचालन कमिटी संयोजक थिए ।
तीनै जनाले जनमत र गौतमबारे भइरहेका टीकाटिप्पणी अध्यक्षहरूलाई सुनाएका थिए । पाँच वर्षलाई काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका सांसदले बीचैमा पद छाड्दा अरू कुनै नै उद्देश्य लुकेको भ्रम पर्ने भएकाले शीर्ष तहबाटै यसलाई स्पष्ट पारिनुपर्ने उनीहरूले बताए । काठमाडौं ७ कम्युनिस्ट पार्टीले जित्दै आए पनि जनमतका हिसाबले धेरै सुरक्षित स्थान नरहेको उनीहरूको ब्रिफिङ थियो । यहाँबाट गत चुनावमा मानन्धरले १८ हजार १ सय २ मत ल्याएका थिए ।
राप्रपाले १० हजार ७९, विवेकशीलले ५ हजार ३ सय ७६, संघीय समाजवादी फोरमले १ हजार ७ सय ८१ मत ल्याएका थिए । यस क्षेत्रमा कांग्रेसका उम्मेदवार थिएनन् । नेकपाबाहेक अन्य सबैको मत जोडदा धेरै अन्तर नहुने लेखाजोखा उनीहरूले गरेका थिए । एक वर्षमै उपनिर्वाचन गर्नुपरेको र सांसदले छोड्नुको कारण पनि प्रस्ट नहुनाले चुनावी नतिजा सकारात्मक नै आउँछ भन्नेमा ढुक्क रहन नसकिने उनीहरूको विश्लेषण छ ।
याे पनि पढ्नुस प्रधानमन्त्रीको फोटो सेयर गर्ने वडा सचिव १५ दिनदेखि हिरासतमा !
काठमाडौं ७ स्थानीय नेवार त्यसमा पनि मानन्धरहरूको गुठी भएको स्थान हो । निर्वाचनमा यस्ता गुठी समूहको बलियो आधार हुन्छ, जुन रामवीरको हकमा पनि सावित हुँदै आएको छ । अहिले चुनाव हारेका, एउटा सांसदलाई हटाएर आफू संसद् छिर्ने उद्देश्यले आएका राजधानीबाहिरका ब्राह्मण उम्मेदवारलाई मतदाताले कति रुचाउलान् भन्ने प्रश्न पनि नेकपाभित्र चर्चामा छ ।
स्थानीय नेताले पार्टीले निर्णय गरेको अवस्थामा सिंगो संगठन गौतमलाई जिताउन परिचालित हुने जानकारी गराएका थिए । अध्यक्षद्वयले भने चुनावबारे निर्णय भइनसकेको बताए । उनीहरूले उपयुक्त समयमा पार्टीले निर्णय लिने जनाउँदै सरकारका राम्रा कामबारे जनतालाई बुझाउँदै गर्न निर्देशन दिए ।
याे पनि पढ्नुस प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा टीका ग्रहण
गौतमका लागि काठमाडौं ७ खाली गराउन लागिएको विषयले सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म हलचल ल्याएको छ । नेकपाकै नेताले यसबारे पार्टीभित्र व्यापक छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेता भीम रावलले पार्टीभित्र यस्ता विषय छलफलबाट टुंगिनुपर्ने सार्वजनिक रूपमै बताएका छन् । ईश्वर पोखरेलले फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै ‘विचार विधि, आचरणलाई नयाँ स्तरमा उठाउनु र स्थापित गर्नु जरुरी रहेको’ उल्लेख गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
ट्याग्स: Bamdev Gautam, cpn, Oli and prachnd